I-FAA ikhupha iimfuno zeenqwelomoya ze-Super Bowl LV kubaqhubi beenqwelomoya ngokubanzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-FAA ikhupha iimfuno zeenqwelomoya ze-Super Bowl LV kubaqhubi beenqwelomoya ngokubanzi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Sports • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-FAA ipapasha iphepha lewebhu elinolwazi ngeTampa, Fla. Indawo yomoya kunye neenqwelo moya
Abaqhubi beenqwelomoya ngokubanzi abafuna ukubhabha ngeenxa zonke eTampa, eFla., EyoMdumba. 3 - 9, 2021, kuyakufuneka bajonge iSaziso se-FAA esiya eAirmen (NOTAM) malunga neenkqubo zezithuthi zommandla. I-Super Bowl LV yiCawa, ngoFebruwari 7, eRaymond James Stadium. Ixesha lomdlalo liya kuba malunga ne-6: 30 pm EST.
The FAA ipapashe iphepha lewebhu elinolwazi ngeTampa, Fla. indawo yomoya kunye nezikhululo zeenqwelo moya. I-Arhente iya kuhlaziya iphepha lewebhu njengoko ulwazi olongezelelekileyo lukhona.
NjengoMsitho oKhethekileyo weSizwe woKhuseleko kuZwelonke, izithintelo ezongezelelekileyo zeenqwelomoya ziya kubakho ngaphambi, ngexesha nasemva kweSuper Bowl.
Inkqubo yokubhukisha ukuququzelela iinkonzo zomhlaba kwezi zikhululo zeenqwelo moya zilandelayo zommandla waseTampa Bay ziya kuqala ukusebenza nge-3 ukuya ku-9, ngo-2021.
Isikhululo senqwelomoya saseTampa (TPA)
Isikhululo senqwelomoya saseSarasota-Bradenton (i-SRQ)
Isikhululo senqwelomoya saseLakeland Linder (LAL)
Isikhululo senqwelomoya saseSt. Pete-Clearwater (PIE)
Iinkqubo ezizodwa zendlela yokunciphisa ulibaziseko lwezithuthi zomoya kunye nokomeleza ukhuseleko ziya kusebenza kwezi zikhululo zeenqwelo moya zilandelayo:
Isikhululo senqwelomoya sendawo i-Brooksville-Tampa Bay (BKV)
Isikhululo senqwelomoya saseTampa (VDF)
IArpwater Airpark (i-CLW)
Isikhululo senqwelomoya selizwe (X05)
Isikhululo senqwelomoya iAlbert Whitted Airport (SPG)
Zephyrhills Airport kaMasipala (ZPH)
Isikhululo senqwelomoya uPeter O. Knight (TPF)
ITampa North Aero Park (X39)
Isikhululo senqwelomoya sasePlant City (PCM)
Isikhululo senqwelomoya iBartow (BOW)
Isikhululo senqwelomoya sasebusika saseHaven Haven (GIF)
Isikhululo senqwelomoya saseZantsi Lakeland (X49)
I-Airport kaMasipala waseVenice (VNC)
Ukufika kunye nokuhamba kweemfuno zendlela:
The QAPHELA kubandakanya ukufika kunye nokuhamba kweemfuno zendlela yeenqwelomoya kunye neenqwelomoya.
Amanyathelo oLawulo lweNdlela yokuLawulwa kweNdlela ye-FAA ye-FAA Amanyathelo olawulo lwezithuthi zomoya anokubandakanya:
Iinkqubo zokuCothisa uMhlaba (GDP)
Iinkqubo zokuHamba kweMoya (AFP)
Ixesha elisekwe kwimitha
Iinkqubo zokubanjwa kweSango
Umnyhadala okhethekileyo we-TFR weSuper Bowl ngeCawe-ngoFebruwari 7, 2021 I-FAA izakupapasha uthintelo lwendiza yexeshana (TFR) yeSupp Bowl LV egxile eRaymond James Stadium. Ngeli xesha, i-TFR kulindeleke ukuba isebenze ukusuka nge-5: 30 pm EST (2130z) kude kube li-11: 59 pm EST (0459z) ngeCawa, ngoFebruwari 7. I-TFR iya kuba ne-10 nautical mile engaphakathi kunye ne-30 nautical mile iringi yangaphandle.
I-TFR yenzelwe ukuhamba ngenqwelomoya ngokubanzi kunye nabaqhubi beenqwelomoya. Abaqhubi beenqwelo moya kufuneka baqhubeke nokujonga https://tfr.faa.gov/ ngolwazi oluhlaziyiweyo ngexesha kunye neenkcukacha zale TFR.
I-TFR ayizukuchaphazela iinqwelomoya ezihleliweyo ezibhabha ngaphakathi nangaphandle kweTampa International Airport (TPA). Unyango olungxamisekileyo, ukhuseleko loluntu kunye neenqwelomoya zomkhosi zinokungena kwi-TFR ngokudibeneyo nolawulo lwezithuthi zomoya. I-FAA iya kuthumela isicatshulwa esipheleleyo kunye nomzobo ocacileyo weSuper Bowl LV TFR kamva ngoJanuwari.